Goobaha Canshuur Diyaarinta ee Bilaashka ah
Is there a free tax preparation site near me?
How can I become a volunteer tax preparer?
Barnaamijka Canshuur Xereynta Bilaashka ah iyo Canshuur-Caawiyaha AARP waxay sameeyaan canshuur diyaarin bilaash ayagoo kuu diyaarin doona, canshuurta federaalka, tan gobolka Minnesota-ka iyo waliba tan kirada gurigaaga. Waxaa jira in ka badan 200 goobood oo ku kala yaalla daafaha gobolka Minnesota. Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto in canshuurtaada bilaash laguugu xereeyo.
Yaa u qalma canshuur diyaarinta bilaashka ah?
Waxaad u qalantaa canshuurtaada in bilaash laguugu xereeyo, haddii:
Aad tahay 60 jir ama ka wayn,
Hadii aad tahay qof naafo ah,
Hadii aad ku hadasho Af-Ingiriis kooban, ama
Dakhligaaga sanadkaan uu yahay 55,000 oo doolar ama ka yar.
Goobaha Canshuur-Caawiyaha AARP ma lahan wax shuruud ah oo ku saabsan dakhligaaga iyo da’daada. Waxayna diyaariyaan canshuuraha caadiga ah.
Canshuurta lacag la'aanta ah ee hadda la joogo ma la heli karaa?
Haa, goobo ayaa furan xilliga xagaaga.
Sidee ku helaa goob canshuur xereyn bilaash ah oo igu dhow?
Warbixinta ku saabsan goobaha canshuuraha bilaashka ah lagu diyaariyo waxaa noo soo gudbiyey ururrada ku diyaariya canshuuraha si (iskaa wax u qabso ah).
Inkastoo warbixintaan ey tahay mid sax ah markii la qoraayey, hadana saacadaha iyo maalmaha waxaa laga yaabaa iney is bed-bedelaan inta lagu jiro xilliga xereynta canshuuraha. Fadlan eeg waqtiyada la furi doono ama la xiri doono goobta canshuurta aad rabto, ka hor intaadan booqan.
Iska hubi nooca barnaamijka (VITA ama AARP), ayadoo laga yaabo in midkood uu leeyahay shuruudo xaddidan, Arag shuruudaha kor ku xusan.
Goob walba waxay kuugu khidmeyneysaa luuqadda Ingariiska. Hadii aad rabto goobo kuugu khidmeeya luuqado kale, fadlan luuqaddaada ka dooro khaanadda luuqadaha.
Canshuur bixiyeyaasha naafada ama curyaanka ah waxaan ku dhiirri-galineynaa iney si toos ah u wacaan goobaha diyaarinta canshuurta, si ey u ogaadaan khidmadaha curyaanka iyo naafada ee ey goobtaasi leedahay ama u sameyn karto qof naafo ah.
Hadii aad heli weydo goob canshuur bilaash ah lagu xereeyo oo kuu dhow, fadlan soo wac 651-296-3781 ama 1-800-652-9094 (khad bilaash ah) si aad caawinaad u hesho.
Maxaan hore u soo qaataa?
Fadlan arag daabacaadda hoos ku xusan, si aad u ogaato waxyaalaha lagaa rabo inaad hore u soo qaadato.
Warbixin la daabacan karo (PDF)